Posted: Adoolessa/July 13, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
Mata duree kanaan barruu kana akkan dhiyeessu kan na taasise, barreeffama dhiyoo kana Obboo Fayyis Oromiatiin mata duree “Oromo Talents in the Habesha Political Clubs” http://gadaa.com/oduu/20698/2013/07/10/oromo-talents-in-the-habesha-political-clubs/ jedhuun dhiyaate dha. Barruulee Obboo Fayyis dhiyeessu, xinnaatee yoo xinnaate waggoota afran dabran keessatti hordofaan ture, hordofaan jiras. Akka ilaalcha kiyyaatitti, barruuleen Obboo Fayyis tokko tokko qabiyyeen isaanii mormisiisaa haa ta’an malee, kan hafan harki caalaan isaanii kan barumsa namaaf kennanii dha jedheen yaada. Ani Obboo Fayyis fuulaan beekuu baadhus, nama beekumsaa fi dandeettii guddaa qabu akka ta’en hubadha. Kanaafuu akka ilma Oromoo tokkootti kabaja fi ulfina guddaan qabaaf. Dandeettii barreessuu isaallee nan dinqisiifadha. Yeroo tokko nan yaadadha, yeroo anis barreessuu jalqabu, yaada jajjabeessaa naaf barreessinaan, “…Obboo Fayyis, nama akka keetii kanarraa yaada hamilee namaa jajjabeessu argachuun kiyya baay’ee na gammachiisa. Ati nama fakkeenya gaarii namaaf taatu dha..” jedhee yaada isaarratti akka deebiitti yaada (comment) koo barreesseen ture. Ammas taanan dandeettii isaa gaafii keessa galchuu kiyyaa miti. Obboo Fayyis nama (Barreessaa) dandeettii qabu dha.
Haa ta’u malee, barreeffamni isaa, kanan armaan olitti kaase kun komii na keessatti uume. Dhugaa dubbachuudhaaf, qabiyyeen barreeffama isaa kunillee kan qabsoo keenya jabeessu fi tokkummaa ilmaan Oromoo cimsu natti hin fakkaatu. Obboo Fayyis, nama waan tokkummaa Ormoo jabeessu barreessaa turee dha. Akkamitti barreeffama isaa kana keessatti dubbii nama mormisiisu akka barreesse naaf hin galu. Asirratti, wantin dubbistoota barruu kiyyaa hubachiisuu barbaadu, anillee silaa yeroo ammaa, yeroo diinni fi alagaan akkasumas tajaajiltuun isaanii gamaa gamanaa qabsoo fi Oromummaa keenyarratti duulaa jiran kana, Sabboontota Oromoo qeequurratti hin xiyyeeffadhun ture. Haa ta’u malee, qabiyyeen barreeffama Obboo Fayyis akkan callisee dhiisu na hin goone. Obboo Fayyis irraa waa baay’een eega. Kanan barreeffama isaa keessatti dubbise garuu faallaa ta’een arge. Kanaaf jedheetan barruu kana dhiyeessuu barbaade malee otuu rakkoolee biroo qabnuu, isaan kana dhiisee Sabboontota keenyarratti olola oofuuf kaayyoo godhadheetii miti. Ani fedhii fi hawwiin kiyya mooraan keenya tasgabbii fi nagaa argatee akka humni Oromoo cimu malee, namoota qeequuf kaayyoo qabaadheetii miti.
Gara ijoo dubbiitti deebi’uudhaaf, maalirraa ka’ee akkan barruu kana dhiyeessu kan na taasisan qabxiilee tokko tokko barreeffama Obboo Fayyis keessaa fudheen yaada koo ibsuu yaala. Obboo Fayyis, jalqaba barruu isaarratti akkana jedha “…We sometimes denounce such fellow Oromo as being collaborators, betrayers of our objective and even paint them as criminals, who did atrocities against the Oromo nation…” Akkuma feene fi karaadhuma feeneenuu haa ilaallu fi hubatnu, akka matayyaatti kennaa ykn dandeettii namootaa dinqisiifachuun waanuma jiruu dha. Haa ta’u malee, hammuma fedhe kennaa ykn dandeettii addaa qabaatus, qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti namni fedhii uummata ykn saba Oromoo faallessee, diinaaf tajaajila kennu gantummaa fi galtummaarraa qulqullaayuu hin danda’u. Amannus amanuu baatnus, jaalannus jibbinus, fudhannus dhiisnus, kun dhugaa lafa jiruu dha. Namootni akkanaa kun, hanga kaayyoo QBO faallessanitti; hanga mooraa diinaa cimsuuf hojjetanitti; hanga qabsoo keenyatti gufuu ta’anitti, kennaa fi dandeettii fedhe qabaatanis isaan kun farra QBO ti yoon jedhe dubbii oo’isuu natti hin fakkaatu. Maaliif yoo jedhame, gabaabumatti meeshaa diinaa waan ta’aniifi.
Asirratti gara qabxii biraatti otuu hin cehin dura, mee fakkeenya Obboo Fayyis kaase waayee taphattoota kubbaa miilaa kan biyya Jarmanii inni jedhu (Klose and Podolski) haa ilaallu. Akka ilaalcha kiyyaatitti, kun waayee saba Oromoo fi qabsoo isaa wajjin hin deemu. Poolaand fi Jarmaniin biyyoota walaba ta’anii dha. Erga uummatni isaanii bilisummaa qabaatanii fi biyyi isaanii walaba ta’anitti, lammiileen isaanii, kan kennaa ykn dandeettii (talent) qaban, bu’aa maallaqaatiif ykn diinagdeedhaaf jedhanii akka dhuunfaatti bakkee fedhanitti yoo taphatan, kun waan fedhii saba ykn uummatoota isaanii faallessuu miti. Otuu yeroo Naaziin Jarmanii Poolaand qabatan (yeroo Waraana Addunyaa Lammaffaa) sana ta’ee; lammiileen Poolaand Naaziidhaaf gargaarsa godhanii turanii, inni kunis akkuma gantummaatti ilaalama ture. Maaliif yoo jedhame, yeroo sana fedhii uummata Poolaand waan faallessaniifi. Har’a garuu erga Poolaand walabummaa ishii qabaatetti, lammiileen ishii bu’aa dhuunfaatiif jedhanii biyya Jarmanii keessatti kennaa ykn dandeettii isaanii yoo gurguran kun yakka hin ta’u. Mee haa jennuu, erga Oromiyaan walaboomte booda, lammiileen Oromoo kan kennaa addaa qaban, fedhii dhuunfaatiif jedhanii biyya Amaaraa dhaqanii yoo waa godhan kun fedhii uummata Oromoo faallessuu natti hin fakkaatu.
Qabxiin biraa, akka ilaalcha kiyyaatti, kan tokkummaa ilmaan Oromoo gaaga’ama keessa galchuu malu, yaada Obboo Fayyis akkana jedhee barreesse dha: “…I think the politics of the empire in the last 300 years, till the Woyane took power in 1991, was seemingly under the domination of some Oromo, including the Amharinya-speaking Oromo. The main crime or mistake these Oromo elites did seem to be their action of promoting and using Amharinya as a national language, neglecting or even oppressing Afan Oromo…” Itti fufuudhaan Obboo Fayyis akkana jedha: “…It is historically recorded that very few soldiers from Tigrai or Semien came to invade Oromia, but mainly the “gallant” Oromo (both Amharinya-speakers and Afan Oromo-speakers) being led by Minilik II and Gobana Daacee did the invasion…” Kun waan baay’ee nama dinquu dha. Mee gaafii gabaabaa tokkon Obboo Fayyisiif dhiyeessa: Waa nafxanyoota Oromiyaa keessatti horani wal horsiisan; kan waggoota dhibba tokkoo fi soddomaa ol Oromiyaa gabroonfataa turani fi jiran Oromoota Shawaa ti jechuu dhaa? Kan caalaatti ajaa’iba namatti ta’u ammoo kan duri haa hafuu; kanuma yeroo Wayyaanee kana yoo fudhanne, kan baay’inaan Oromiyaa keessa jiran loltoota Tigroota ta’an otuu hin taane Oromoota Shawaa kan Wayyaanee tajaajilanii dha jechuu isaa tii?
Obboo Fayyis, loltoota Tigree kan har’a Oromiyaa keessatti akka galaanaa uummata keenyarratti dhangala’aa jiran fi nu weeraranii biyya keenya qabatanii jiran kana lakkoofsi isaanii baay’ee xiqqaa dha jedhinaa laata? Lakkoofsi loltoota Tigree xiqqaa yoo ta’e, kan hafan loltoota Oromoo Shawaa ti jechuu isaatii? Kaayyoon barreeffama kanaa seenaa fi dhugaa jiru nutti himuuf moo Oromoota jidduutti wal shakkii fi wal balaaleffachuu uumuufi? Karaa biraatiin, siyaasaan impaayarittii kan waggoota 300 keessatti, hanga bara 1991tti, gaggeeffamaa ture harka caalummaa Oromoo tiini jechuun isaa, kan Dr. Fiqiree Tolasaa jedhuun waan wal fakkaatu dha. Oromoon sirumaa hin gabroonfamne jechuu maaltu nama dhoowwa (dhoorka) ree? Bara 1991 booda garuu harka caalummaa Wayyaaneetiin akka ta’e nuuf ibsa. Kun lakkoofsi Tigree xiqqaa dha kan jedhu sana hin faallessuu? Moo lakkoofsi isaanii xiqqaa dhaa, garuu siyaasaa keessatti harka olaanaa qabu jechuu isaa ti? Obboo Fayyis waan biraa nu barsiisaa ykn nutti himaa turee; amma garuu akkuma Habashootni nuun jechaa jiran, warri bebbeekamoon (kan kennaa addaa qaban) kan impaayara tana keessatti hogganummaa olaanaa qabaachaa turan Oromoota waan ta’aniif yookaanis dhiiga Oromoo waan of keessaa qabaniif, lakkii Oromoon hin gabroonfatamne nuun jechuufi?
Akkuman armaan olitti, jalqaba barreeffama kiyyaa kana keessatti ibse, Obboo Fayyis nama kennaa (talent) qabuu dha jedheen amana. Haa ta’u malee, akka barreeffamni isaa kun mul’isutti, garuu innumtuu kennaa isaa kanatti fayyadamee; siyaasaa faallaa fedhii Oromoo ta’e keessatti dhaamsa biraa nuuf dabarsuu waan barbaade fakkaata. Tarii kanaaf jedhee, dursee Oromootni kennaa qaban, kan kilabiilee siyaasaa Habashaa (Habesha Political Clubs) keessatti dalagaa jiran, balaaleffatamuu hin qaban jechuuf ta’inaa laata? Barreeffama Obboo Fayyis kana keessatti qabxiileen baay’ee mormisiisaa ta’an heduutu jiru. Haa ta’u malee, hunduma isaaniituu tokko tokkoon asitti dhiyeessee yaada koo irratti barreessuu irra; kan hafan dubbistootaaf dhiisuudhaan; xumura barreeffama kiyyaarratti, gaafiin ani Obboo Fayyis fi namoota akka isaatiif dhiyeessuu barbaadu: Kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo, kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle, hiikkaan isaa maali? kan jedhu ta’a. Ani dura Oromoo dha! Oromummaatu dursa!
Jul 14, 13 at 7:19 am
Yaada hedduu cimaa ta’e qabattee dhufte. Anis akkuman barreeffama obbo Fayyisiin dhihaate sana dubbiseen deebiin irraa argadhe caalaa gaaffii inni natti uumetu baay’ate. Dhugumatti namootni marsaalee interneetii oromoo gara garaa hordofan obbo Fayyis akka gaariitti beeku. Obbo Fayyis, beektota Oromoon horate keessaa tokko akka ta’an waan haalamu miti. Haata’u malee barreeffama obbo Fayyis keessaa summiin dhibee hinbeeku. Kunis immoo wallaalee osoo hintaane beekaadhuma hamilee ummata keenyaa gadi qabuuf dhoksaatti waan hojjetu isa fakkeessa.
Keessumaa barreeffamni isaa inni dhihoo kanaa kun ergaan isaa nama hubateef hedduu ifaa dha. Innis “ummatni Oromoo habashaan hinkoloneeffatamne” yaada jedhu qabatanii warra dhaaba haaraa ijaaranii ummata keenya dura dhaabachuuf socho’aa jiran, warra ODF, jajjabeessuuf akkasumas immoo mooraa habashootaa irraa xiqqoo dhiphina hir’isuuf akka tattaafachaa jiran nuuf ibsa. Akkuma beekamu Fayyis namni ofiin jedhu kun beektota warra ODF duuba dhaabatanii jiran keessaa isa tokko akka ta’e innuu yeroo hedduu sagantaa isaanii “endorse” gochuun nuuf addeesseera. Erga yeroo dhihoo kanaa asittis warra tokkummaa Ethiopia jedhan akka deeggaruu fi maqicha iyyuu “Oromiyaa” jennee jijjiiruu akka qabnu ifatti katabaa ture. Kunis sagantaa QBO gufachiisuuf shira gareeleen tokko tokko ittiin deemaa jiran nutti mul’isa. Warri ODF, gaaffiin ummata Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa fi bilisummaa osoo hintaane gaaffii “ambummaa” (citizenship)ti jechuudhaan bifa QBO jijjiiruu bira taranii gaaffii ummatichaa gadi xiqqeessanii jiru. Barreeffamni obbo Fayyis dhiheessus yeroo cuunfamu kanarraa fagoo miti. Namootni tokko tokko yaada isaa kana irraa ka’uun namni kun Leencoo Lataa ta’uu hin oolu jedhani shakku. Garuu namni kun bakka dhalootaan Leencootti yoo dhihaate malee akka isuma hinta’iin haala barreeffama isaa qofa ilaalanii mirkaneessuun ni danda’ama. Namni kun nama dubbisuuf akkasumas xiinxaluuf yeroo bal’aa kennee socho’aa jirudha malee nama akka Leencoo Lataa ta’ee dubbii hidhaa oolu miti.
Waa’ee Oromoota shawaa ilaalchisee olola akkasii baroota hedduuf oofaa kan turan “cell” Leencoo Lataa faa ti. Garuu dhugaan jiruu fi ragaan mootummaa wayyaanee irraa argannu akka nuuf addeessuutti, mooraan tikaa fi basaasaa wayyaanee kan guutame Oromoota lixa Oromiyaa irraa argamaniin ta’uun isaa waan qorannaa gadi fagoo nama gaafatu miti. Duubatti deebinee waan yeroo dargii tures ilaaluun ni danda’ama. Kaadirootni dargii sadarkaa xiqqaarraa hanga “high profile intelligent agents” tti kan turan ijoollee Shawaa miti. Seenaa haaluun beekaa nama godha osoo hintaane “harsama” seenaa nama godha.
Kaayyoon Obbo Fayyis gabaabaadhumatti adeemsa warri ODF itti jiran ololuu irra darbee sammuu Oromootaa xureessee qaawwaa hinfayyine Oromoota gidduutti uumuu dha. Kanaaf immoo duula inni Oromoota Shawaa irratti bane qofa ilaaluun gahaa dha.
Jul 16, 13 at 1:47 am
—–Seenaan Oromoo Akka Janus Fuula Lama Qabaa Laata—–
Barreffamni kun kan ani Afaan Oromootiin yeroo duraaf dhiyeese waan ta’ef, yoo dogoggorri keessa jiraate na ofkolcha. Akka ani amma Afaan Oromootiin yaada koo dhiyeesuu yaalu na kakaase, deebisaa Obbo Abdii Boruu barrefama koo tokkoof kenne dha: http://gadaa.com/oduu/20777/2013/07/13/kennaan-dandeettii-fi-beekumsi-oromoo-kan-fedhii-saba-oromootiif-hin-taane-ykn-hin-oolle-hiikkaan-isaa-maali/ . Duraan dursee Ob Abdii waan lamaaf galateefachuun barbaada: tokkoffa yeroo hunda yaada isaa Afaan Oromoo bareedaa, midhaawa fi qulqulluu dhan nuuf dhiyeesuu isaaf; lammaffaa ammoo bareeffama koo sana irratti akka Oromoo tokkotti kabajaa fi naamusaan qeeqa kennuu isaaf. Keesattu namummaa koo fi yaada koo adda baase ilaaluun isaa namoota hedduu bareeffama sana dura-dhaabbatani na shakkani fi na yakkan irraa adda isa godha. Fakkeenya gaarii ta’uu isaatiif ulfina guddaa qaba; na birattis ni kabajama.
Bareefamni koo qeeqame sun akkasitti awwaara kaasuun isa karaa tokko na gaddisiise, karaa biraa ammoo na gammachiise. Kan na gadisiise, jarjarsuudhaan maxxansuu irraan kan ka’e waan xixiqoo irraa of qusachuu dhiisuu koo ti. Barreefamni kun wagga lama dura “Ethiopian review forum” irratti barreefame malee, akka ‘article’ tokkootti, hamma dhumaatti itti hin yaadamne ture; waan ani dhiyeenya kana deebisee bareefama “Jawarawi Harakat…” jedhu keessatti kaaseef, namni biraa fide akka yaada (comment) godhee maxxanse. Namni na beeku tokko ammoo yaada kana dubbisee, “kun mataan isa akka ‘article’ tokkotti otuu maxxansamee dansaa dha” jedhee yaada naaf kenninaan jarjarsuu dhaan maxxansiise. Jarjarsuu kana keessatti, maqaa kutaa tokkoo (Shoa) fi maqaa namoota kutaa sana keessaa akka fakkeenyatti kennuun koo akka dubbistoonni hedduun jallaatti na hubatan godhe. Warri akkas na hubataniis na shakkuu fi na yakkuu filatan. Kan na gammachiise ammoo, namuu yaada isaa garagaraa dubbii sana irratti kennatee mariihachuu isaa ti.
Yoo fakkeenyaaf seenaa keenya yeroo waraana addunyaa II, bara lolaa Xaliyaanii waliin goone (Oromoo gar tooko Xaaliyaan lolani, kaan ammo Xaaliyaan faana dhaabbatanii Habashaa lolan) fi Oromota nafxaanya Minilik ta’anii lafa argatan tokko-tokko ilaallu, gaaffiileen ka’uu malan: fuula lamaan kana akka seenaa Oromootti fudhachuu dandeenya moo tokko filachuu qabna? Bifa lamaan kana keessaa tokko jajuu fi kan biraa xiqqeessuu qabna moo lamaanuu qixa ilaaluu dandeenya? Yoo tokko filanne hoo, maaliif filanna? Fuula lamaan walitti fidnee, achi keessaa seenaa waloo tokko baasuu ni dandeenya?…kkf dha. Keessattu warri siyaasa Oromoo gaggeessu, seenaa tokko yoo dhiyeesan, akka mul’ata isaanii tajaajilutti ta’uuf itti yaadaniitu. Kanaaf natti fakkaata, qaamonni siyaasa Oromoo warri “federeshina dhugaa ijaarra, Ethiopia keessatti Oromiyan of bulchuu qabdi” jedhan, seena lamaanu kan keesumsiisan. Achirra ka’aniitu kaayyoo ‘Ethiopian Federation ykn Kush Federation ykn Oromian Fedreation’ jedhu qabatanii kan deeman. Deegartoonni yaada kanaa gar-tokko, yoo furmaata yeroo dheeraaf ta’u barbaanne, “maqaa federation ijaaruuf deemnu sana Oromiya haa baasnu” jechaa jiru. Yoo kana goone, gara fulduraatti, “Oromootu Ethiopiawinet fudhata otuu hin taane, Habashaatu Oromiyawinet fudhata” jedhanii amanu.
Amma gaaffilee Ob Abdii kaasee sana gaggabaabsee deebisuuf: yoon loltoota Semien fi Tigrai jedhu, loltuun Abyssinia bakka biraa (Gojjam, Gondar Kibbaa fi Lasta) Minilik II faana hin turre jechuu koo miti; loltoonni isaa hedduun garuu Shoa kaabaa keessaa ta’uu waan haallu natti hin fakkaatu; loltuun Tigrai ammoo Oromiya keessatti kan heddummaatte erga 1991 as malee, isa dura hin turre; “mooraa diinaa keessa kan hojjete hundi meeshaa fi gantuu dha” waan jedhu kun sirrii natti hin fakkaatu; moora diinaa keessa taa’ani firaaf hojjechuu fi miidhaa tokko lammii irratti otuu hin dalagiin jiraachuunis numa jira; ani barrefamaa koo keessatti kutaa Oromoo tokko yakkuu hin barbaanne, yakkamtoota Oromoo hundas qulqulleessuunis feedhii koo hin turre; garuu namoonni yaada koo dubbisan gar-tokko warri akkasitti na hubatan, otuu irra deddeebisanii yaada koo dubbisanii nan gammada; fakkeenyi kubbaa miillaa Jarman fi Poland sun yaaduma koo ibsuuf malee, taphatoota sana namoota haala siyyaasa keessa jiran wajjiin wal qixxeesuuf miti; Dr Fikre seena kan waggaa 3000 barreesse, ani ammoo kan waggaa 300 duwwaan ilaale, kanaaf yaadni keenyi lamaan wal hedduu wal hin fakkaatu.
Waanuma fedheefuu, awaara dheekkamsaa fi marii ho’aa akkasi kaasuun sun milkaa’ina barreefama sanaa argisiisa. Marii godhame hundatti ani gammadeen jira. Barreeffama dhihaatan keessatti, qabxiileen tokko-tokko namoota mariif akka kakaasuutti, yoo barbaachise akkas ‘provocative’ ta’uun barbaachisaa dha. Dubbistoonni gar-tokko garuu, waanuma yaadni koo isaaniif hin liqimsanneef jecha, waan ani “hammina dhoksaan” deemu fakkeessanii himuu barbaadan (they wanted to make a diagnosis of my “evil intention”). Kun dogoggora keessa isaan buusa malee, waan ani deemuf beekuu isaanii hin argisiisu. Gara fulduraafuu, akka Ob Abdii godhe kana yaada mormuu fi xiinxaluu irratti otuu xiyyeefatanii gaarii dha. Hunda caalaa ammoo, ani yaada koo barreessee kaniin maxxansuu “barsiisuuf” miti, yoo namoonni yaada irratti kennan deebisee achi irraa barachuuf malee. Deebi’ii ani barreefama sanaaf argadhe garuu kan nama ajaayibu: dubbistoonni gar tokko “this is collective criminalization” jedhanii akka ani Oromoo kutaa tokkoo yakketti hubatan; warri kaan ammoo “this is collective de-criminalization” jedhanii akka ani yakkamtoota qulqulleesuu yaaleetti na fudhatan. Bareeffama tokkoof bifa wal hin simmanne lama kennan. Kan ani gochuu barbaade garuu, “importance of critical history” argisiisuu ture; “politicized history” hunda of waga’uu dhiisnee, ija qeeqaatiin seenaa keenya haa ilaallu jechuu koo ti. Hunda caalaa garuu, yoo akka dogoggoraatti fudhatame, maqaa kutaa Shoa duwwaa kaasuun koo, olola diinaaf karaa akka bane arguu dandaheen jira.
The campaign of Ethiopiawinet (Ethiopian nationalism) to dilute Oromummaa (Oromo nationalism) is a futile excercise. If the territorial integrity of the union is chosen to be kept intact by the Oromo people, then we now need to move on and struggle to realize the following five important virtues: 1) Democracy including the national self-determination to be the future rule of the political game in the federation/union; 2) Afaan Oromo to be the primary working language of the federal government; 3) Freedom from the hegemonist Woyane and from any sort of national domination; 4) Odaa to be the centeral part of the flag for the union; 5) Great-Oromia (land of the braves) to be the name of the future true federation, replacing Ethiopia (land of the burnt face). Only the fulfillment of these five parameters can be the possible garantee for the future long lasting multinational federation. If the other nations including the Abyssnians fail to accept this demand and/or offer, the further push for an independent republic of the Core-Oromia is inevitable. It is up to them to choose an integrative Great-Oromia in order to avoid the disintegration of the union, which will be caused by an eventual independent Core-Oromia.
Dhuma irratti gaaffii Ob Abdii isa guddaa sana deebisuun yaala. Inis akkas jedhee gaafate: “kennaan, dandeettii fi beekumsi Oromoo kan fedhii saba Oromootiif hin taane ykn hin oolle hiikkaan isaa maali?” Hiikkaa isaa sirriitti arguuf waan lama adda baasuu qabna: hiikkaa kennaan akkasii lammiif qabu fi hiikkaan inni nama sanaaf qabu. Kennaan, dandeettii fi beekumsi nama akkasi kun, fayidaa lammii fi saba isaaf hin oolle malee ofi isaaf qabeenya guddaa dha. Nammoota akkasi kana irraa dandeettiin isaani mulqamuu hin qabu, ammoo garee hin taaneef akka oole himuun barbaachisaa dha. Yoo kennaan kun yakka lammii ofii irratti hojjechuuf oolee jira ta’e, ragaa dhiyeessuudhaan himamuu qaba. Ergaan ani barreefama sana keessatti dabarsuu yaales kanuma. Dandeentii dhuunfaa namoota akkasiif beekumsa kennuu jechuun, yakka isaanii irraa dhiquu jechuu miti. Yoo yakka hojetanii jiru ta’es, “they are simply well talented criminals”. Kanaatii achi, haala amma keessa jirrutti yoo fuula Janus (seenaa Oromoo) lamaan keessaa tokko dhiisnee, isa kaan duwwaa ilaalle, kun garaagarummaa ilalchaa ti malee yakka miti. Ani fuula isaa tokko yoon arge, Ob Abdii ammoo isa bira yoo ilaale, lamaan keenyu mirga qabna. Kanaaf jenne wal hin balaalefannu, hin abaarru, hin yakkinu; hunda caalaa ammoo Rabbi/Waaq keenyas akka nuti wal hubannu numa nu gargaara; haa jabaannu!